DEG-DEG: Man United, Liverpool mise Man City - Mid ka Mid Ah Kooxaha Ingiriiska Oo Kulan Degdeg Ah Yeelanaysa, Kana Baxaysa Tartanka Muranka Dhaliyey Ee Super League - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Man United, Liverpool mise Man City – Mid ka Mid Ah Kooxaha Ingiriiska Oo Kulan Degdeg Ah Yeelanaysa, Kana Baxaysa Tartanka Muranka Dhaliyey Ee Super League
DEG-DEG: Man United, Liverpool mise Man City – Mid ka Mid Ah Kooxaha Ingiriiska Oo Kulan Degdeg Ah Yeelanaysa, Kana Baxaysa Tartanka Muranka Dhaliyey Ee Super League
April 20, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Ugu yaraan hal koox oo ka mid ah lixda naadi ee waaweyn ee Premier League ayaa yeelanaysa kulan degdeg ah oo ay go’aan kaga gaadhayso tartanka European Super League, kaas oo ay doonayso in ay ka baxdo.
Kubadda cagta Yurub ayaa qalalaase ku jirtay muddo saddex maalmood ah kaddib markii ay 12ka kooxood ee ugu waaweyn qaaraddaasi shaaciyeen tartan gooni ah oo sida Champions League oo kale ah oo ay samaysanayaan, isla markaan ay lacago badan ka helayaan.
Kooxaha Ingiriiska ee lagu naanayso ‘Lixda Waaweyn’ ayaa ku jira, waana Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham, kuwaas oo ay soo raaceen Atletico Madrid, Barcelona iyo Real Madrid oo reer Spain ah iyo saddexda Talyaaniga ah ee Inter Milan, Juventus iyo AC Milan.
Mashruucan cusub oo kooxaha aas-aaseyaasha u damaanad qaadaya in sannad walba ay si toos ah uga soo qayb-galaan iyagoo xilli ciyaareed kasta helaya lacag gaadhaysa $400 milyan oo dollar, ayaa waxa uu la kulmay mucaarad badan oo kaga timid taageereyaasha kubadda cagta, khubarada, xidhiidhada kubadda cagta iyo xataa ciyaartoyda kooxahan qaarkood.
Habeenkii xalay, taageereyaasha Leeds United ayaa ku mudaharaaday ciyaartoyda Liverpool oo gelayay garoonka Elland Road kulankii ay barbarraha soo galeen.
Si kastaba, wargeyska The Times oo ahaa midkii warkan xogtiisa oo dhan soo gudbinayay illaa bilowgii ayaa shaaciyey in mid ka mid ah kooxaha Ingiriisku ay hadda ka fiirsanayso in ay iskaga baxdo tartanka Super League ee ay aas-aaseyaashiisa ka midka ahayd.
Wargeyska ayaa sheegay in shir degdeg ah ay kooxdaasi ku jirto, isla markaana ay ka tashanayso in ay tixgeliso dareenka taageereytaasha kubadda cagta oo ay ka tagto tartankan ay marka hore qaybta ka ahayd.
Liverpool oo kabtanadeeda Jordan Henderson iyo James Milner ay kasoo horjeedsadeen tartankan, sidoo kalena tababare Jurgen Klopp uu horeba meel adag uga istaagay ayaan la ogeyn in ay iyada tahay, laakiin Manchester City ayuu culays noocaas oo kale ahi haystaa, iyadoo Pep Guardiola uu maanta caddeeyey in aanu tartan caadi ah noqon doonin Super League.
Si kastaba, kooxda ay noqon doonto ayaan illaa hadda la ogeyn, waxaase jira culays badan oo dhamaan kooxaha lagu saarayo in ay ka noqdaan qorshaha ay ku doonayaan samaynta tartanka cusub.